အိပ်ရေးပျက်တာက အမြင်အာရုံကို ဘယ်လို ထိခိုက်စေသလဲ........ - Hello Sayarwon
အိပ်ရေးပျက်တာက မကောင်းဘူးဆိုတာကိုတော့ တော်တော်များများက သိထားပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ အိပ်ရေးပျက်တာက ကိုယ်ခံအားကို အားနည်းစေပြီး ဖျားနာလွယ်တယ်။ စိတ်ဖိစီးစေပြီး ရေရှည်မှာ စိတ်ဓာတ်ကျလာစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ အားလုံးလိုလို သိထားပြီးသားပါ။
နောက်တစ်ချက်က အိပ်ရေးပျက်တာက ဦးနှောက်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျဆင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတာပါ။ အိပ်ရေးပျက်တဲ့အခါ အာရုံစူးစိုက်ဖို့ ခက်လာပြီး ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေလည်း ကျဆင်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဒီအချက်တွေတင် မဟုတ်ဘဲ အိပ်ရေးပျက်တာကြောင့် နေ့စဉ်ဘဝမှာ အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ထိခိုက်လာစေနိုင်တဲ့အကြောင်းလေး ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
အိပ်ရေးပျက်တာကြောင့် ထိခိုက်လာနိုင်တဲ့ နေ့စဉ်ဘဝအတွက် အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု
ယနေ့ခေတ်မှာ ညဘက်ကို ဖုန်းသုံးရင်း၊ ဂိမ်းဆော့ရင်းနဲ့ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်မိတယ်ဆိုသူက ခပ်ရှားရှားပါ။ ညတိုင်းမှာ အိပ်ချိန် ပြည့်ဝတဲ့သူဆိုတာ လက်ချိုးရေလို့ရတဲ့ အနေအထားပါ။ အိပ်ရေးပျက်တာက နောက်တစ်နေ့တာရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတင် ထိခိုက်စေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ မျက်လုံးလေးတွေကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ညဘက်တွေမှာ အိပ်ရေးပျက်တာက အမြင်အာရုံကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ အိပ်ရေးပျက်တာက မျက်လုံးတွေကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အမြင်အာရုံနဲ့ မျက်လုံးတွေ ကျန်းမာစေဖို့ဆိုရင် ညဘက်တိုင်းမှာ ပြည့်ဝတဲ့ အိပ်စက်ချိန် ရှိဖို့လိုပါမယ်။
အိပ်ရေးပျက်တာကြောင့် ခံစားရနိုင်တဲ့ အမြင်အာရုံ ပြဿနာတွေက ဘာတွေများလဲ…….
အိပ်ရေးပျက်တာကြောင့် အခုလိုမျိုး အမြင်အာရုံ ပြဿနာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အမြင်အာရုံ ဆုံးရှုံးတာ မျိုးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အိပ်ရေးပျက်တာက အမြင်အာရုံကို ဘယ်လို ထိခိုက်စေနိုင်လဲ ……..
လေ့လာမှုတွေအရ မျက်လုံးတွေ ကျန်းမာစေဖို့ဆိုရင် တစ်ညတာကို အနည်းဆုံး အိပ်ချိန် ၅ နာရီ ရှိဖို့ လိုပါမယ်။ အိပ်ချိန် ၅ နာရီဆိုတာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်စက်ချိန်ကို ပြောတာပါ။
တကယ်လို့ ပြည့်ဝတဲ့ အိပ်စက်ချိန် မရှိဘူးဆိုရင် မျက်လုံးတွေက လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါဘူး။ အိပ်ရေးပျက်တာကြောင့် သိသိသာသာ ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ မျက်လုံး ပြဿနာတစ်ခုက မျက်လုံး အကြောဆွဲတာပါ။ မျက်ခမ်းသားတွေ လှုပ်လာပြီး တစ်ခုခုကို စိုက်ကြည့်ဖို့ ခက်လာတာမျိုးပါ။
မျက်လုံး ဖျတ်ခနဲ ပိတ်ပိတ်သွားတာက ကြီးကြီးမားမား ထိခိုက်စေတာမျိုး မဟုတ်ဘူးဆိုပေမယ့် တော်တော်လေးတော့ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်တာပါ။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်တာပါပဲ။ ကာလတို အိပ်ရေးပျက်မှုရဲ့ အကျိုးဆက်ပေါ့။
ဒါ့အပြင် အိပ်ရေးပျက်တာကြောင့် မျက်လုံးသွေးကြောတွေရောင်တာ၊ မျက်လုံးညောင်းတာ၊ မျက်လုံးခြောက်တာ၊ အလင်းစူးရင် မျက်လုံးက မခံနိုင်တာ၊ မျက်လုံးထဲမှာ ချောဆီအလုံအလောက် မရှိတာမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်သလို အမြင်အာရုံ ဝေဝါးတာမျိုးတွေကိုလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေအပြင် ပြင်းထန်တဲ့ အကျိုးဆက် အနေနဲ့ Anterior Ischemic Optic Neuropathy (AION) ကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ညဘက် အိပ်မပျော်တာကြောင့်လည်း ရေရှည်မှာ အမြင်အာရုံကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်တာမျိုးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အိပ်ရေးပျက်တာ များလာတာကြောင့် အသက်ရလာတဲ့အခါ မျက်လုံးထဲက သွေးကြောတွေ ရောင်ရမ်းတဲ့ ပြဿနာကိုလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ မျက်လုံးထဲက သွေးကြောတွေဆီကို သွေးစီးဆင်းရောက်ရှိမှု မလုံလောက်တာကြောင့် အာရုံကြောတွေ ထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊ အမြင်အာရုံ ဆုံးရှုံးတာမျိုးအထိ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အိပ်ရေးပျက်တာကြောင့် မျက်လုံးလေးကို မထိခိုက်စေဖို့
အိပ်ရေးပျက်တာကရေရှည်မှာ မျက်လုံးကိုရော အမြင်အာရုံကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေအပြင် မလိုလားအပ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ညစဉ်တိုင်းမှာ အိပ်ချိန် ပုံမှန် ရှိအောင် သေချာလေး ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ညအိပ်ခါနီးမှာ ဖုန်းသုံးတာ၊ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုတာမျိုးတွေ မလုပ်ပါနဲ့။
အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ စာအုပ်ဖတ်ပါ။ ချာမိုမိုင်း ရေနွေးကြမ်းလေး တစ်ခွက်လောက် သောက်ပါ။ တရားထိုင်ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချပါ။ တစ်နေ့တာလုံးမှာ ကဖင်း ပမာဏကို ကန့်သတ်ထားပေးပါ။ ညနေဘက်မှာ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
တစ်နေ့တာလုံးမှာ ပင်ပန်းထားတဲ့ မျက်လုံးလေးတွေကို ညဘက်ရောက်တဲ့အခါ ပြည့်ဝတဲ့ အိပ်စက်ချိန် ရှိအောင် သေချာလေး ဂရုစိုက်ပေးရင်း မျက်လုံးလေးတွေကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ပြည့်စုံအောင် သေချာလေး ဂရုစိုက်ပေးပါ။
How Lack Of Sleep Affects Your Vision http://www.ehnpc.com/general/how-lack-of-sleep-affects-your-vision/ Accessed Date 20 September 2021
Does lack of sleep affect your vision? https://www.optimax.co.uk/blog/lack-sleep-of-affects-vision/ Accessed Date 20 September 2021